my kitchen my life: Duck breast with berry sauce
pettodanatra glassato in agrodolce con salsa ai frutti di bosco
duck breast with sweet and sour berry sauce
ပျင်းတယ်ဗျာ။ Ramadan ဆိုတော့ ဧည့် ပါးတယ်။ ဒီပို့စ်ကို အရင်က တင်ခဲ့ဘူးလိမ့်မယ်။ ဓါတ်ပုံပဲ မတင်ရသေးတာ။ ဘဲရင် အုံ သားကို salt & pepper နဲ့ seasoning လုပ်ဗျာ။ နောက် griddle ပေါ်ကို တင်ထားလိုက်။ berry sauce လုပ်မယ်။ cranberry ကို ရေစင်အောင်ဆေး ထားပါ။ ပထမဦးဆုံး သကြားကိုအရင် ကြိုရပါမယ်။ သကြား အရေပျော်ပြီး အညိုရောင်သမ်းလာရင် grated orange zest ထည့်၊ orange ကို ပါထည့်လို့ရပါတယ်။ orange နွမ်းသွားရင် cranberry ကို ထည့်ပြီး ကောင်းကောင်းသမပေတော့။ orange juice လေးနည်းနည်း ပေါက်ထည့် ။ကြိုက်တတ်ရင် ၀ိုင် ထည့်ဗျာ။ရေထည့်စရာ မလိုဘူး။ သူ့ဟာနဲ့သူ အတော်ပဲ။အရသာကတော့ ထုံးစံ အတိုင်း salt & pepper ပေါ့။
ဘဲသားရရင် sliced လှီး ပြီးရင် sauce ကို အပေါ်က ကြည့်ကောင်းအောင်စမ်းပေးလိုက်ပါ။
side dish ကတော့ စိတ်ကြိုက်ပေးပေါ့။ hasselback potato or accordion potato အကြောင်းကို ဒီနေ့ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အကော်ဒီယမ် အုန်းကျော် တော့ မဟုတ်ဘူး။ အကော်ဒီယမ် အာလူးတဲ့။း)
နောက် အသီးအရွက်ကတော့ တခုခုထည့်လိုက်တော့ဗျာ။ done...! pick up ! ;P
Posted by leo mark at 3:00 AM